Aqoonyahano ku dhowaaqay inay doonayaan midnimada Soomaaliya - Jowhar Somali news Leader
Home News Aqoonyahano ku dhowaaqay inay doonayaan midnimada Soomaaliya
Aqoonyahano ku dhowaaqay inay doonayaan midnimada Soomaaliya
“Soddon sanadood sida iminka Soomaalidu ahayd, gaar ahaan labada gobol laguma sii jiri karo, oo umadnimadu kuma sii jiri karto marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaa ee dhacay iyo kuwa iminka labada dhinacba gudahooda ka jira iyo isbedallada waaweyn ee gobolka Geeska Afrika ka dhacaya oo u baahan in la helo jiho cusub oo ka duwan wixii sodonkii sano ee u dambeeyay lagu jiray,” ayuu yiri Maxamed Baashe Xaaji Xasan, xiriiriyaha dhaqdhaqaaqa Mar Kale Midnimo oo BBC-da la hadlay.
Waxaa kale oo uu Baashe sheegay in xubna kamid ah ay ku sugan yihiin gudaha Somaliland, gaar ahaan, Hargeysa iyo Burco degaannada kale iyo dibedda, waxaana uu yiri “si qarsoodi ah ayaanu gudaha uga shaqeynaa.”
Wasiirka kuxigeenka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa sheegay in dadka Somaliland ay dib ula soo laabtaan xorriyadooda.
“Boqolaal isaga (Baashe) ka badan, ka aragti badan, ka aqoon badan ayaa marar badan naga taga oo Soomaaliya aada, kana shaqeeya midnimo iyo arrimo noocas ah, marka dambena Somaliland dib usoo codsaday o cafis ha la inoo fidiya yiraahda,” ayuu yiri wasiir Cabdinaasir.
Mar wax laga weydiiyay sababta aysan dadkaas ugu oggolaaneyn in fekerkooda ay kusoo bandhigaan Hargeysa ayaa wasiirka waxaa uu sheegay in taasi aysan xorriyad qawl ahayn, dastuurka Somaliland-na aysan ku qorneyn.
Inkastoo aan la ogeyn saameynta uu yeelan karo baaqa kasoo baxay dhaqdhaqaaqan ayaa haddana waxa jira dad badan oo aaminsan qaddiyadaas, kuwaas oo aan tegi karin deegaannada Somaliland.
Hadalka ururkan ayaa sidoo kale yimid xilli maalmo kahor la hadal hayay safar aan waxba ka suurtagelin oo la sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaraaha Itoobiya ay ku tegi rabeen magaalada Hargeysa.